Luis Eduardo Montás ‘Akarwisa Seshumba’ | Bhuku Regore ra2015
AKABHABHATIDZWA MUNA 1947
NHOROONDO YOUPENYU Aiva nechinzvimbo mubato raRafael Trujillo. Akadzidza chokwadi cheBhaibheri uye akashumira Jehovha akatendeka kusvikira paakazofa muna 2000.
LUIS aiva hama yaTrujillo, uye akashanda semubati wehomwe mubato raitonga rainzi, Partido Dominicano (Dominican Party). Zvisinei, Luis aisvotwa nezvaiitwa mubato iri raTrujillo, asi pasinei nekumboedza kusiya chinzvimbo chake mubato racho, Trujillo haana kumubvumira.
Trujillo paakaurayisa vakoma vaviri vaLuis, Luis akaedza kaviri kuuraya mudzvinyiriri wacho. Zvisinei, haana kumbobvira afungirwa kuti ndiye aiedza kuzviita. Luis akatomboenda kumasvikiro, achida kubatsirwa kuti auraye murume uyu waakati nezvake, “Aiita sechikara chesango uye aizviona seanokosha kupfuura vamwe vose.” Paaiva mumba merimwe svikiro akaona bhuku rinonzi “The Truth Shall Make You Free” riri patafura ndokutanga kuriverenga. Luis akafarira zvaiva mubhuku racho zvekuti akaenda naro kumba kwake uye akazogutsikana kuti ichi ndicho chaiva chokwadi cheBhaibheri chaaitsvaka.
Luis paakaenda kuCiudad Trujillo, akapinda musangano weZvapupu zvaJehovha uye akatora mabhuku nemagazini. Akaita usiku hwese achiverenga mabhuku acho uye akazokumbira kudzidza Bhaibheri. Sezvaaifambira mberi, Luis akasarudza kusiya hurumende yaTrujillo. Trujillo paakazviziva, akaudza Luis kuti aida kumupa chinzvimbo chepamusoro-soro chekuva mumiririri weDominican Republic kuPuerto Rico. Asi Luis akaramba, kunyange zvazvo aiziva kuti aigona kunge ari kuzvisikira moto muziso.
Luis anoti: “Hurumende yacho yakaedza zvese zvayaigona kuti ndisasiya basa rangu, uye ndakatambudzwa nenzira dzakasiyana-siyana. Asi ndainge ndatsunga kusiya mafaro enyika ino.” Luis akasvika pakuva muparidzi wemashoko akanaka aitaura zvinhu sezvazviri, zvekuti vapristi veRoma vaimudana kuti “muparidzi.” Luis akabhabhatidzwa musi wa5 October 1947, pashure pemwedzi mitanhatu kubva paakapinda musangano kekutanga.
Abhabhatidzwa kudaro, Luis akatsvagwa nemaziso matsvuku, akaiswa mujeri ndokuvharirwa kwake oga. Vakaedza kakawanda kumuuraya. Zvisinei, pose paaisungwa achiendeswa kudare redzimhosva, aishandisa mukana wacho kuti ape uchapupu. Luis anoti: “Ndakarwisa seshumba ndichidzivirira kutenda kwangu, uye ndinonzwa kufara pandinozvifunga.”
Zvaiitwa naLuis semushumiri akatendeka waMwari zvaionekwa nevavakidzani vake. Muna 1994, pepanhau remuDominican Republic rinonzi El Siglo rakataura nezvaLuis richiti: “Mr. Luis Eduardo Montás vanozivikanwa muSan Cristobal semunhu anokoshesa zvaanoita. Murume iyeye chipo chaicho. Ane tsitsi uye anozvininipisa. Munhoroondo yeSan Cristobal murume uyu anozivikanwa zvikuru nebasa rake rekuparidza semuKristu.”